October 2020 - Nepali in Australia
October 20, 2020 October 20, 2020 EditorLeaveaComment on Breaking News: अन्तत कक्षा १२ को परिक्षा लिने मिति तोकियो !
काठमाडौं / कोरोना महामा’रीका कारण स्थगित भएको कक्षा १२ को परिक्षा छठ लगतै लिइने भएको छ । आइतवारसाँझ बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले कार्यविधि पारित गरी परीक्षा लिने निर्णय गरेको हो । बोर्डका अनुसार मंसिरको दोस्रो साताबाट परीक्षा लिने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिनेछ । बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा लिँदा कक्षा ११ को ४० प्रतिशत […]
October 20, 2020 October 20, 2020 autherLeaveaComment on नेपाल घुम्न आउनै नहुने यि ७ कारण भन्दै एक भारतीय महिलाले पोष्ट गरेको भिडियो विश्वभर भाइरल (भिडियो हेर्नुस्)
मानसी अग्रवाल नामकी एक भारतीयले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको ‘नेपाल घुम्नै नहुने ७ कारण’ अहिले भाइरल भएको छ। शिर्षक हेर्दा नकारात्मक जस्तो लागेपछि उनले पोष्ट गरेको भिडियो सामग्री भने सकारात्मक छ । उनले अंग्रेजी भाषामा नेपालको बारेमा भिडियो निर्माण गरी सामाजिक सञ्जालमा राखेकी छिन्। उनले पाटन दरबार स्क्वायरलाई ब्याक ग्राउण्डमा राखी कस्ता मानिस नेपाल घुम्न […]
काठमाडौ । कोरोना भाइरसको महामा’री फैलिदै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै स्लोभानियामा देशव्यापी कफ्र्यु घोषणा गरिएको छ । देशव्यापी कफ्र्यु रातिमा मात्रै लागु हुने र मङ्लबारदेखि शुरु हुने अधिकारीहरुले सोमबार जानकारी दिएका छन् । युरोपेली मुलक स्लोभानियामा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको महामारी अत्यन्त नराम्रोसँग फैलिएको समाचारमा जनाइएको छ । हरेक बेलुका नौ बजेदेखि विहान ६ बजेसम्म कफ्र्यु […]
October 19, 2020 October 19, 2020 autherLeaveaComment on ५ दिनमै मोटोपन घटा`उन र किड्नीको सफाई गर्न अपनाउनु होस् यी उपाय
हामीमध्ये कसैलाई पनि अनाव`श्यकरुपमा मोटा`उनु राम्रो लाग्देन । त्यसो त, मोटोपन रोग लुकाउने पर्दा समेत हो। हामी मोटोपनबाट मुक्त हुन विभिन्न अभ्यास गर्दछौं । तर यो कहाँ सजिलो छ र ? तर यहाँ तपाईको लागि एउटा यस्तो चामत्कारिक विधि छ, जुन घरमै उपलब्ध हुने सामग्रीबाट तयार बनाउन सकिन्छ । यस्तो घरेलु उपचार पद्धतिले शरीरमा जम्मा […]
October 19, 2020 autherLeaveaComment on नेपाल घुम्न आउनै नहुने यि ७ कारण भन्दै एक भारतीय महिलाले पोष्ट गरेको भिडियो विश्वभर भाइरल (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । मानसी अग्रवाल नामकी एक भारतीयले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको ‘नेपाल घुम्नै नहुने ७ कारण’ अहिले भाइरल भएको छ। शिर्षक हेर्दा नकारात्मक जस्तो लागेपछि उनले पोष्ट गरेको भिडियो सामग्री भने सकारात्मक छ । उनले अंग्रेजी भाषामा नेपालको बारेमा भिडियो निर्माण गरी सामाजिक सञ्जालमा राखेकी छिन्। उनले पाटन दरबार स्क्वायरलाई ब्याक ग्राउण्डमा राखी कस्ता मानिस […]
सर्व साधारणको लापरवाही बढेको भन्दै आज बाट निषे`धाज्ञा लागू
October 19, 2020 October 19, 2020 autherLeaveaComment on सर्व साधारणको लापरवाही बढेको भन्दै आज बाट निषे`धाज्ञा लागू
काठमाडौ । चाडपर्व नजिकिए संगै बढेको चहल पहलले कोरो`नाको जो`खि`म बढाएको भन्दै आजबाट मोरङमा निषे`धाज्ञा लागू गरिएको छ। पछिल्लो समय सर्वसाधारणको लापरवाही बढेको भन्दै प्रशासनले निषे`धाज्ञा लागू गरेको हो । त्यस्तै झापा र सुनसरीमा भने एकदिन अघि बाट नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषे`धाज्ञा लागू गरेका हुन्। त्यस्तै पार्टी प्रवेशका नाममा गरिने राजनीतिक दलका कार्यक्रमले पनि […]
पुरानो मोटरसाइकल दिएर बीना डाउन पेमेन्ट कार पाइने !
October 19, 2020 October 19, 2020 EditorLeaveaComment on पुरानो मोटरसाइकल दिएर बीना डाउन पेमेन्ट कार पाइने !
काठमाडौं । मारुती सुजुकीको आधिकारीक वितरक सिजी मोटो कर्पले पुरानो मोटरसाइकल ल्याएर बीना डाउन पेमेन्ट मारुती सुजुकी अल्टो र एसप्रेसो खरिद गर्न सक्ने अफर सार्वजनिक गरेको छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****** कम्पनीको अफर अनुसार तपाईले चढिरहेको मोटरसाइकल मूल्याङ्न गरेर कम्पनीले खरिद गर्ने छ । त्यसैलाई डाउन पेमेन्ट […]
संकटकाल र कर्फ्यु लाग्नेबारे गृहमन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो विज्ञप्ती
October 19, 2020 EditorLeaveaComment on संकटकाल र कर्फ्यु लाग्नेबारे गृहमन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो विज्ञप्ती
काठमाडौं, ३ कात्तिक । गृह मन्त्रालयले सामाजिक संजाल तथा मोवाइल म्यासेजहरुमा कर्फ्यु लगाइने भन्ने गलत सुचना प्रवाह भइरहेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आज एक बिज्ञप्त्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले सुरक्षा संवेदनशील बिषयलाई जोडी संकटकाल कर्फ्यु लाग्ने भन्ने सुचना तथ्यहीन, भ्रामक, निराधार र गलत भएको जनाएको छ । साथै ती समाचार तथा सन्देशहरुमा बिश्वास […]
October 19, 2020 EditorLeaveaComment on नवराज विकको प्रेमिकाको पहिलो अन्तरवार्ता, घटनाका बारेमा खोलिन् यस्ता रहस्य (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । नवराज बिकको प्रेमिका भनिने युवती सुष्मा मल्ल पहिलोपटक मिडियामा आएकी छिन् । आमा र अधिवक्तासँगै उनी प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएकी हुन् । उक्त घट्नाको बारेमा सुष्माले आफूले नवराज विकसँग फेशबुकमा हाईहल्लो हुने गरेको भएपनि विवाहबारे आफूले कहिल्यैपनि नसोचेको र कुरा नगरेको स्पष्ट पारिन् । आफूले नवराजलाई नबोलाएको […]
October 19, 2020 EditorLeaveaComment on हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको सुनको भाउ तोलाको कति ?
काठमाडौं । सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य स्थिर रहेको छ । सोमबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९४ हजार ७०० रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९४ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । आज चाँदीको मूल्य […]
आज राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी उपत्यकामा थप प्रतिबन्धहरू लगाइयो (पत्रसहित)
अहिले लाइसेन्सको फारम भर्दा तीन वर्षपछि परीक्षा, यस्तो छ देशको हालत !